I-OxygenOS 9.0.2 ngoku iyafumaneka kwi-OnePlus 6 enezinto ezininzi ezintsha | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Uyifaka njani ingxelo entsha yeOxygenOS 9.0.2 kwi-OnePlus 6
UAron Rivas | | OnePlus, Tutorials
Umenzi waseTshayina ukhupha uhlaziyo lwe-OxygenOS 9.0.2 kwifayile ye OnePlus 6. Oku kubandakanya phantse onke amanqaku athenjiswe ngumenzi wesixhobo xa kusungulwa isixhobo. OnePlus 6T. Kwakhona kuzisa utshintsho oluninzi kunye nophuculo kunye nezinto ezithile ezintsha.
Phakathi kwezona zinto zibalulekileyo eziziswa yi-OxygenOS 9.0.2, zizimbo zomzimba ezintsha zokuhamba. Ukongeza koku, ibandakanya iNightscape kunye nomsebenzi wokukhanyisa isitudiyo we-OnePlus 6T. Ezi zinto zimbini zintsha ziya kuphucula ukusebenza kweekhamera ze-OnePlus 6 zokufota ngokukhanya okuncinci.
Uhlaziyo lwamva nje luphucule ngakumbi ujongano lomsebenzisi kwimenyu yefowuni. Njengakwi-OnePlus 6T, le nguqulo intsha ye-OxygenOS iphucula ukusetyenziswa kwamandla ngelixa ubeka ifowuni kwimowudi yokulinda. Unokwabela umsebenzi wokubamba iqhosha ukuvula umncedisi kaGoogle okanye nayiphi na insiza.
Ukongeza ekuzeni neendaba ezininzi ezinomdla, I-OnePlus ikhupha i-patch yokhuseleko ye-Android yamva nje ngeendlela ezahlukeneyo zokhuselo. Nalu uhlaziyo olupheleleyo lokutshintsha:
0.1 Utshintsho kunye neendaba kwinkqubo:
0.2 Utshintsho kunye neendaba kwikhamera:
1 Uyifaka njani ingxelo entsha yeOxygenOS 9.0.2 kwi-OnePlus 6
Utshintsho kunye neendaba kwinkqubo:
Iimpawu ezintsha zokuhamba.
Ukuphuculwa kwe-UI kwifowuni.
Ukusetyenziswa kwamandla okulinda okulungiselelwe.
Uhlaziyo lwepatch yokhuseleko kwi-2018.11.
Yongeze inkxaso yokuphehlelela uMncedisi kaGoogle okanye enye insiza yomntu wesithathu ngokucinezela nokubamba iqhosha lamandla kwimizuzwana eyi-0,5.
Ukulungiswa kwe-bug ngokubanzi kunye nophuculo.
Utshintsho kunye neendaba kwikhamera:
Yongeze ukukhanya kwesitudiyo ukuphucula ulwandiso lobuso.
Okokuqala, Kuya kufuneka sijonge ukuba uhlaziyo lufikile na. Ukwenza oku, kufuneka siye kwi Cwangcisa > Malunga nefowuni > Ukuhlaziywa komsebenzi. Ukuba iyafumaneka, kufuneka nje ucofe ukhuphelo okanye ufake kwaye ulinde inkqubo igqibe. Sincoma kakhulu ukuba ifowuni iqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi koku kunye nokuhlawuliswa kwebhetri elungileyo.
Ngokumalunga nokufumaneka kweOxygenOs 9.0.2 yeOnePlus 6, Sicebisa ukuba silinde iintsuku ezimbalwa okanye iiyure ukufikelela kwiifowuniNjengoko ezi ntlobo zohlaziyo zihlala zisasazwa ngokuthe ngcembe ngingqi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Uyifaka njani ingxelo entsha yeOxygenOS 9.0.2 kwi-OnePlus 6
UBernardo vera sitsho
Othandekayo ngu-9.0.2 ingxelo entsha. Ukubulisa
Phendula uBernardo Vera
UAron Rivas sitsho
Ngokuchanekileyo, uBernardo. Enkosi.
Phendula kuAron Rivas
Ukuqinisekisa kwakhona: lincinci ixesha lokuba i-WhatsApp ibonise iintengiso
Lawula isibhakabhaka seMfazwe yesibini (II) yeHlabathi Jikelele ngenqwelomoya wenqwelomoya kunye noMqhubi womoya oLwayo: WW2 Pacific